टनकपुरबारे सुशीलको जवाफ खै? | Bridge to Nepal and Nepali
टनकपुरबारे सुशीलको जवाफ खै?
टनकपुर भारतकै हो भनेर बिना प्रसङ्ग फागुन १६ गते नेपालगञ्जबाट बोलेर बिमिस्टेकको बैठकमा भाग लिन म्यानमार हिडेका प्रम सुशील कोइरालाले भारतीय प्रम डा.मनमोहन सिंहको न्यानो आतिथ्य पाए। सिंहले कोइरालालाई कार्यकालको सफलताको कामना गरे। के भारतका प्रम मनमोन सिंहलाई खुसीसाथ भेट्नकै लागि प्रम सुशील कोइरालाले टनकपुर भारतकै हो भनेका थिए।
यस सम्बन्धमा फागुन १९ गते संसदमा कुरा उठ्यो र सभामुखले यसबारेमा रुलिङ गरे। सभामुखले गरेको रुलिङ महिनादिन नाघिसक्यो तर प्रम सुशील कोइरालाले यथार्थ संसदलाई जानकारी दिएका छैनन। राष्ट्रिय सीमाका मुद्दामा यति ठूलो खेलाची गर्ने सरकार कसरी राष्ट्रिय हुनसक्छ? पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सहमति गरेर आएका थिए र त्यतबिेला मुद्दा नै पर्‍यो र अदालतले टनकपुर सहमति होइन सम्झौता हो भनेर किटानी फैसला गरेको थियो।
नेपालतर्फ ५७७ मिटर भूभागमा टनकपुर एफलक्स बन्ड निर्माण भएको प्रमाणत भइसकेको सन्दर्भमा टनकपुर भन्ने ठाउँ भारतमा पर्ला तर टनकपुर बाँधको सन्दर्भमा नेपालतर्फ पनि जलासय छ र भारतले १३ मेगावाट विद्युत र नेपाललाई पानी दिनेसमेत व्यवस्था भइआएको छ। यसकारण पनि सुशील सरकारले तत्काल संसदलाई उनले दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्छ र टनकपुर बाँधका सम्बन्धमा संसदले जानकारी राख्नुपर्छ।
टनकपुर विवादका सम्बन्धमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले स्पष्ट रुपमा लेखेका छन्– ‘ सन् १९२३ को त्यही नक्सामा सीमा स्तम्भ नं. १ ब्रम्हदेव मन्डी नजिक र त्यसको साढे ४ किलोमिटर दक्षिणमा स्तम्भ नं. २ (त्यस बखतको आमखोली गाड खोला र महाकाली नदीको संगममा) गाडिएको देखिन्छ। सन् २०१४ को गुगल इमेजलाई १९२३ को नक्सामाथि ओभरले गरी हेर्दा साविक सीमा स्तम्भ नं. २ रहेको स्थान समेतबाट पश्चितर्फ टनकपुर ब्यारेज (बाँध) निर्माण भएको स्पष्ट देखिन्छ।
यसैगरी सीमा स्तम्भ नं. २ बाट उत्तरतर्फको स्तम्भ नं. १ सम्म खिचिएको सीमारेखाभन्दा पूर्वतर्फको सुरुतिर जलाशयको भाग रहेको देखिन्छ भने त्यस सीमारेखाको पुरै पूर्व (नेपाल) तर्फ ५७७ मिटर लामो टनकपुर एफ्लक्स वन्ड निर्माण भएको देखिन आउँछ। यसबाट २६ ढोका भएको टनकपुर ब्यारेजको पूर्वतर्फबाट लगभग दोस्रो ढोकामा साविक सीमा स्तम्भ नं. २ को अवस्थिति रहेको अन्दाज गरिन्छ, जनुचाँहि हाल जलाशयभित्र पर्छ।
यसबाट नेपालको करिब ९ हेक्टर जमिन जलाशयमा परिणत भएको देखिन्छ। यस बाहेक ब्यारेजबाट उत्तरतर्फ बनाइएको ५ सय ७७ मिटर लामो एफ्लक्स वन्डदेखि पश्चितर्फको सीमारेखा (नक्सामा देखाइएको) सम्म करिब २१३ हेक्टर जमिनसमेत गरी नेपालको २२२ हेक्टर भू–भाग टनकपुर ब्यारेजको संरचनाभित्र परेको देखिन आउँछ। यसबाट टनकपुर ब्यारेजको पूर्वी भाग नेपालमा पनि पर्छ भन्न सकिन्छ।
यसो त टनकपुर बाँधसमेतको २०५२ माघ २९ मा गरिएको महाकाली सन्धिको धारा २ (१) मा नेपाली भूमि तथा सो भूमिको पश्चिमतर्फ रहेको जलाशयभित्र पर्ने नेपाल–भारत सीमासम्मको ९ हेक्टर भूमि र महेन्द्रनगर नगरपालिका, जिमुवा गाउँको करिब २ दसमलव ९ हेक्टर क्षेत्रको नेपाली इलाकामा नेपालको अविच्छिन्न सार्वभौमिकता तथा नियन्त्रण अन्तर्गत रहनेगरी एफ्लक्स वन्ड बनाउन दिने भन्ने उल्लेख छ। तर गुगल नक्साअनुसार सन्धिमा उल्लेख गरिएको भन्दा थप २१० हेक्टर नेपाली भू–भाग एफ्लक्स वन्ड पश्चिम टनकपुर संरचनाभित्र परेको देखिन आउँछ।
यसरी सन्धिमै उल्लेख भएको टनकपुर विषयमा प्रधानमन्त्रीको नजरअन्दाज भएको वा जिब्रो चिप्लिएको हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतलाई खुशी पार्नुभन्दा पनि नेपालको हक बेहक गर्ने खालको हलुका टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिले प्राप्त विज्ञहरुको राय बुझेर बोल्ने गर्नु उपयुक्त हुनेछ। अन्यथा सस्तो राजनीतिक लाभका लागि सजिलो जिब्रो फटकार्दा राष्ट्रिय रुपमा मुलुकलाई हानी हुनसक्छ।
अर्को » पीआर काण्डले अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रीवीच मारामार »
पहिलाको » आधा होइन, साझा संविधान »